မေမြို့ တောင်ကြီး စသော တောင်ပေါ်မြို့ကလေးများကို နှစ်သက်စွဲလမ်းသည်။ မေမြို့ ၂၁ မိုင်သို့ ကြာဇံဟင်းခါး သောက်ရန်သက်သက် သွားဖူးသည်။ ရှမ်းပြည်ကို နှစ်သက်သဘောကျသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်မိသည်။
"ပလီတဲ့ခွေး Underwater ကူးစမ်း" ဆိုသည့် ဘယ်သူ စပြီး ထွင်လိုက်သလဲ မသိသော စကားကို အရမ်း နှစ်သက်သဘောကျသည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့် စကားပြောသည့်အခါ အသံကျယ်ပြီး စကားပြောမြန်သည်ဟု သမုတ်ခံရသည်။ အစ အနောက်သန်ပြီး နာမည်ပြောင်ပေးသည့်နေရာ၌ ကျွမ်းကျင်သည်။
ပိုးဟပ် ဟုခေါ်သော သတ္တ၀ါကို သေမလောက်ရွံသည်။ ထို့ထက်ပိုဆိုးသည်ကား ဟိုမရောက် ဒီမရောက် နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်း အခြောက်များ။ ပိုးဟပ်များကို တွေ့လျှင် တွေ့သည့်နေရာ၌ သတ်ပစ်တတ်သည်။
မတူသလို မတန်သလို စကားမပြောချင်သလို စတိုင်လ်ရှိသောသူများ၊ စမန်တက် (ဘ၀င်လေဟပ်) နေသော ဂိုက်ပေးကြမ်းလွန်းသောသူများ၊ ရေတွင်းဝ၌ အီးပါသောသူများအား ဆွဲထိုးချင်လောက်အောင် သောက်မြင်ကတ်၏။ ထိုကဲ့သို့သော လူများကိုလည်း ပညာကောင်းကောင်းပေးရန် ၀န်မလေးပေ။
မိတ်ကပ် ထူလပျစ် လိမ်းတတ်သော မိန်းကလေးများ နှင့် လဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်တတ်သည့် အကျင့်ရှိသော မိန်းကလေးများကို ကြည့်မရ။ သနပ်ခါးလေးနှင့် မြန်မာဆန်ဆန်လှသော မိန်းကလေးများကို နှစ်သက်သဘောကျသည်။
အ၀တ်အစား လက်ဝတ်ရတနာ တို့အပေါ်၌ နှစ်သက်ခုံမင်ခြင်းမရှိ။ တန်ဖိုးနည်းသော်လည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် နှင့် စတိုလ်ကျကျ ၀တ်စားဆင်ယင်တတ်သူများကို သဘောကျ၏။ Fancy ပစ္စည်းလေးများကို အမြတ်တနိုး ၀တ်ဆင်တတ်၏။
အမိ စိုးကြည် [Done]
ကိုတုံ (မောင်လှ) [Done]
mayvelous 11:07 pm
writing style ka MinTheinKha lo lo bar lo lo. Kg par tal. You ka tate ma weird buu which is good ofcos. :P
21mile tat pyi kyar san chat sarr tar taw nal nal weird tal. Kyar san chat ka 21mile ka harr ka po kg tal htin tal. Mhat htar ya mal. Nout 21mile yout yin twar sar kyi fo.
Myo Kyaw Htun 2:19 am
>>ပိုးဟပ် ဟုခေါ်သော သတ္တ၀ါကို သေမလောက်ရွံသည်။ ထို့ထက်ပိုဆိုးသည်ကား ဟိုမရောက် ဒီမရောက် နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်း အခြောက်များ။ ပိုးဟပ်များကို တွေ့လျှင် တွေ့သည့်နေရာ၌ သတ်ပစ်တတ်သည်။<<
မန္တလေးမှာ ညည အခြောက်တွေကို လိုက်သတ်နေတာ ကိုချမ်းပေါ့။
mg myo aung 4:16 am
MYO HAN HTUN 5:06 am
ရေးချင်တာတော့ ကြာပါပြီ .. ရေးပေးဆိုလည်း ရေးပေးပါ့မယ် .. ရေးတာများသွားရင်လည်း ကိုတိုးတစ်ယောက်တော့ လွန်လွန်းတယ်လို့ မဆိုစေချင်ပါဘူး .. ဟီး ဟီး
မောင်ချမ်း စကားများလား မများလားဆိုတာ သူ့ ဆီဗုံးက သက်သေပြပြီးသားး)
မေမြို့ထိတောင်သွားပြီး ကြာဇံဟင်းခါးသောက်တယ်ဆိုတော့ ကြာဇံဟင်းခါးကို ကြိုက်တာလား ၊ မေမြို့ကို ကြိုက်တာလား ။
ဟိုက်ရှားပါး.. မခြောက်တခြောက်တွေကို သတ်မယ်ဆိုပါလား ။ မာမီရန်တို့ မာမီတက်စလာတို့ကို သတင်းသွားပေးထားဦးမှ ဟားဟား ။
လဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တဲ့ မိန်းကလေးကို ဘာလို့ ကြည့်မရတာလဲ ။ သူလဲ လဘက်ရည် သောက်ချင်ရှာမှာပေါ့ ။
အလဲ့.. စတိုင်လ်ကျကျ ၀တ်တဲ့သူကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း စတိုင်လ်ကျကျ ၀တ်တတ်တယ်လို့ သွယ်ဝှိက်လိုက်တယ်ပေါ့ ။ တော်ပါပေတယ်း)
Ko Nay Gyi 7:29 am
ဒီပုံအတိုင်းသာဆိုရင် မြန်မာဆန်တဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ နီးပါစေ ဆုတောင်းပေးရမှာပေါ့....။ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာကော ကော်ဖီဘယ်နှစ်ခွက်သောက်တတ်ပါသလဲ....။ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမို့ မေးထားရတာ....။ :P
CMS 8:55 am
mayvelous: thz: sis :)
myokyawhtun: တိုးတိုးပြော လူတွေသိကုန်မယ် :P
mg myo aung: သားကလည်း ကိုဖီအာနန်ထက်တောင် အလုပ်၇ှုပ်ပုံရတယ်နော်။ ဒီလိုလုပ် အတန်းပြီးသွားရင် ဘောပင်နဲ့စာရွက်ယူ အန်တီ့ဆိုင်မှာ ကော်ဖီသောက်ရင်း ချရေးလိုက် ပြီးနေတဲ့ဟာ .. အဲလောက်ထိ မပလီနဲ့ မကြိုက်ဘူး ..ဟွန်း :P
myo han htun: မဆိုပါဘူးဗျာ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ ဟဲဟဲ
မဂျစ်: မေမြို့ကို ပိုကြိုက်တာဗျ ဟီဟီး
မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေရင် ကျွန်တော့်မျက်စိထဲမှာ ကန့်လန့်ဖြစ်နေလို့ပါ :D
ကိုယ်တိုင်ကတော့ စတိုင်လ်ကျတယ်လို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး ပုံမှန်ပါပဲဗျာ :)
Great to hear that CMS. Everytime, I believe, u will be mature.
Great to hear that. Why i can't participate with u.
CMS 10:06 am
thz: U T Lone
s_potato 11:04 am
MELODY MAUNG 11:52 am
Reading person kya tot yaw 11mie nyein aung su taung mha pay bu lar byar. (Ko Chan, Nyat nar liet tel kwar)
ကိ.. တယ်ဟုတ်တယ်.. တယ်ဗျ.. မိုက်တယ်.. ထူးခြားချက်တွေက.. ဟ.. ဟ..
CMS 6:32 pm
s_potato :> သိန်းကျော်တို့ ကားလာရင် ကောင်းမလေးတွေ ကြည့်ကြတာကောင်းပါတယ် ကောင်းပါတယ် .. အဲ ယောင်လို့ သိန်းကျော်တန် ကားပါရင် ကောင်းမလေးတွေကြည့်ကြတာ ကောင်းပါတယ် ကောင်းပါတယ် :P
MELODY MAUNG :>rading person ka nyein pee thar so dot ma lo dot bue htin lo par :D
khunmk :> ဒီမန္တလေးသားလေးကိုလည်း Tag လုပ်ဖို့ လူလိုက်ရှာမှ ဖြစ်တော့မယ် ^_^
Myo Kyaw Htun 10:07 am
I tagged you back :) have fun!!!
ahmeisoekyi 2:43 am
ဟဲဟဲ နောက်ဝီးယသ် တစ်ခုရှိသေးတယ်လဲ ...
သီချင်းဆိုရင် ပတ်ပျိုးသီချင်းကြီး မှနားထောင်လို့ ရတယ်ဆိုပဲ.. သြော်သြော်..မှားလို့၊ မြန်မာsong တစ်မျိုးတည်းသာ နားထောင်လို့
မြန်မာဆန်တာ မြန်မာဆန်တာ ဟဲဟဲ :D
sann oo 4:09 am
သနပ်ခါးလေးနှင့် မြန်မာဆန်ဆန်လှသော မိန်းကလေးများကို နှစ်သက်သဘောကျသည်။
CMS 5:55 am
ဘာလဲ ... တူနေလို့လား :P
သဉ္ဇာ 7:57 am
တောင်ပေါ်မြို့တွေမှာ ပိုးဟပ်အရမ်းပေါတယ်ဆိုရင်ကော နေမှာလား :P